Tilmaamaha: 30 aan caadi ahayn laakiin qaabab macaan oo cuntada loo kariyo - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS Tilmaamaha: 30 aan caadi ahayn laakiin siyaabo macaan loo kariyo cuntada
SIDEE LOO XAQAALAYAA DHALASHADA DHALASHADA
Haddii aadan aqoon sida loo diyaariyo dhalashada BFF, fiirso fiidiyahaan oo baro sida loo qurxiyo keega dhalashada iyo xitaa ka dhigto masterpiece dadaal la'aan! Waxaad ka heli doontaa qaabab sahlan oo loogu qurxiyo keeg sida pro. Uma baahnid inaad ahaato cunto-cunsi si aad uga abuurto peony a glaze glaze. Habka ugu fudud ee loogu qurxiyo ducadaha koobka waa in la isticmaalo xirmooyinka xumbada. Haa, waa kaftan. Nadiifi duub xumbada oo ku fidi shukulaatada ku duub xumbada. Qabooji oo ka saar xirmooyinka xumbada.
Soo hel uruurinta macmacaanka shukulaatada ee aad diyaarin karto adigoo isticmaalaya kaliya 5 daqiiqo. Diyaarso baaquli shukulaato ah si loogu adeego jalaatada ama lagu qurxiyo kareem. Ku buufin buufin kuna dhex walaaq baaquli. Kubad ku dhex rid shukulaatada dhalaashay, demi oo qabooji. Soo hel fikradaha qabow ee ku saabsan sida loo qurxiyo keegga shukulaatada. Waxaad baran doontaa sida loo sameeyo shukulaatada "seals", caleemaha shukulaatada iyo waxyaabo kale oo badan.
Keega marble waa isku darka cajiibka ah ee keega shukulaatada iyo keega. Waxaad u baahan doontaa labo dhalo caag ah si aad u diyaariso keegaan. Isku qas sonkorta, budada dubista, saliidda iyo ukun dhalada koowaad iyo waxyaabo isku mid ah oo ku jira dhalada labaad. Hal faahfaahin - ku dar budada kookaha dhalada labaad. Qaado warqad dubista oo sameeyso qaab xargaha dusha sare ee jilicsanaanta adiga oo kor ka eegaya hal lakab.
00: 09 Sida loo qurxiyo keeg
01: 09 rooti roobaadka
03: 51 Codadka Shukulaatada
06: 27 Iced Cake
09: 27 "xirmooyin" shukulaato
14: 13 Cake Cake Recipe
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=M8ZRDw5XNx0
Cagaarshowga A oo ku xidhan berry laga iibiyay Maraykanka - BGR